SomaliaReport: Booqashada Sahanka Wasiirka Ingiriiska Puntland
Booqashada Sahanka Wasiirka Ingiriiska Puntland
Wafdi Ingriis ah oo Puntland Ubooqday Hordhaca Shirka London
By YUSUF MOHAMUD 01/30/2012
Waxaa maanta caasimada gobolka Puntland ee Garoowe soo gaaray wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Horumarinta Caalamka ee Ingiriiska, Mudane Andrew Mitchell. Wufuuda sharafta leh waxaa si diiraan ugu qaabilay Garoonka Diyaaradaha ee garoowe ugu soo dhaweeyey masuuliyiin ka socda Dawlada Puntland. Wufuudu waxay shirar kala duwan la galeen Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Cabdisamad Cali Shire iyo Golaha Wasiirada.
Waxaa saxaafada si wadajir ah ula hadlay Madaxweyne Ku Xigeenka iyo Mudane Mitchell. Madaxweyne Ku Xigeenka ayaa taxaafada usheegay wada hadalkay la yeesheen wafdiga oo ku saabsanaa xiriirka horumarinta Puntland ee dowlada Ingiriiska iyi sidii xirrirka labada dowladood loo xoojin lahaa. Madaxweyne ku xigeenka ayaa suxufiyiinta usheegay in arrimaha burcadnimadu ay ugu muhiimsanayd wada hadalka. Arrimaha muhiimka ah ee lasoo qaaday waxaa ka mid ahaa Shirka London ee dhici doona Febraayo 23, 2012.
Mudane Mitchell ayaa isna ka hadlay fikrada booqashadiisa isagoo iftiimiyay wada hadaladii mira dhalka ahaa ee uu la yeeshay madaxda Puntland.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo wasiirkii ugu horeeyey oo Ingiriis ah oo booqda gobolka Puntland. Waxaan madaxweyne ku xigeenka Puntland la yeeshay wada hadalo tayo leh oo ku saabsan mashaariicda horumarinta ee dowlada Ingiriiska iyo shirka dhexdhexaadinta Soomaaliya ee ka dhicidoona London,” ayaa wasiirku sheegay.
Mudane Mitchell ayaa intaa ku daray “Waxaan booqan doonaa Suuqa Kalluunka ee dowlada Ingirrisku hirgalisay waxaana rajaynaynaa in booqashadani mashaariic kale soo galbindoonto. Waxaan kaloo dowlada Puntland ka wada hadalnay dhibaatada burcada iyo siyaabaha looga hortagi karo arrintan iyo arrimo kale oo dhib ugaysan kara nabada gobolka.” Wafdigu wuxuu kaloo booqday Isbitaalka Guud ee Garoowe, saldhig Boliis, xabsi iyo Jaamacada Gobolka Puntland.
Mudane Andrew Mitchell wuxuu yahay wasiirkii ugu horeeyey ee Ingiriis iyo Midowga Yurubiyaan ah ee booqda Puntland. Booqashadiisu waxay kusoo hagaagtay qorshayaasha loogu diyaargaroobayo shirka wada heshiisiinta caalamiga ah ee London lagu qabandoono oo ka qaybgeli doonaan wufuud Puntland ka socda.